Coronavirus စုစုပေါင်းသော့ခတ်လာသောအခါနှင့်မည်သည့်အရာကလာသည်နှင့်အမျှစမ်းသပ်မှုနှင့်စစ်တပ် - Martin Vrijland
ROMY & Savannah ပြဿနာ
ငါတို့ WHO က
MIND မှ & အသက်ကို CONTROL
စုစုပေါင်း coronavirus ပိတ်ဆို့ခြင်းလာသောအခါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်: စမ်းသပ်မှုပို့စ်များနှင့်စစ်တပ်
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 21 2020 အပေါ်	• 25 မှတ်ချက်
ကျနော်တို့နယ်သာလန်အတွက်စုစုပေါင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ Rutte နှင့် King Willem Alexander တို့၏မိန့်ခွန်းများသည်နံရံပေါ်ရှိဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်ပြီးလူများအားစိတ်ကျေနပ်စေရန်နှင့်အရာအားလုံးအားလုံးကောင်းမွန်မည်ဟုထင်မြင်စေရန်ဖြစ်သည်။ "ဒါဟာနည်းနည်းပိုကြာလိမ့်မယ်ဒါကသူတို့ကပေါ်လာစေပုံဖြစ်ပါသည်။ ငါဆိုသည်ကား၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် (အတုအယောင်) ဒီမိုကရေစီ၏နိဂုံးနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏အစကိုကယ်တင်ခြင်းအဖြေအဖြစ်ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အာဏာရှင်စနစ်၏အလုံးစုံပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကိုအဆုံးသတ်စေလိမ့်မည်။
ရှိပြီးသား ဤဆောင်းပါးတွင် ငါထိုကဲ့သို့သောသော့ခတ်တူသောပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ငါမြင်နေရတာထက်ပိုပြီးမြင်သာအောင်လုပ်ချင်တယ် ပြီးသားဒီမှာ.
သံချပ်ကာကားများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမေရီလန်းပြည်နယ် (၀ ါရှင်တန်ဒီစီအနီး) ။ ပြီးသားလမ်းများမှတဆင့်။ ထို့အပြင်လူ ဦး ရေမှာစိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်းနှင့်ပြည်နယ်သည်ပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးနေသည်ဟုသတင်းများရရှိသည်။ ရုံနယ်သာလန်၌ရှိသကဲ့သို့။
ဒါကနယ်သာလန်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မင်းပြောနိုင်တယ်။ စပိန်တွင်ပြင်သစ်၌လူများကိုဖမ်းဆီးပြီးဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့မီဒီယာတွေကမင်းတို့ကိုဒီလူတွေကညွှန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူး၊ လူတွေဆီကိုလာရောင်းတယ်၊ မင်းတို့ရှေ့မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးလား။
သငျသညျသောင်းချီအမေရိကန်စစ်တပ်အဘယ်သို့ထင်ဘို့ Vlissingen ၌တည်၏ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား သူတို့ဟာ Defender Europe 2020 စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်လာခဲ့ပေမယ့်ဒီနေရာကိုပဲရောက်လာခဲ့တာပါ။ သူတို့ဘာတွေအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းဖို့လွယ်တယ်။
သငျသညျအားလပ်ရက်စိတ်ဓာတ်သို့ဆည်းပူးခြင်းနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရန်ဖခင်အရာအားလုံးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လျှင်, နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 'အရာအားလုံး' ကစာသားအရ roundups များပြုလုပ်ကြပြီးလူများဖမ်းဆီးလိမ့်မည်ဆိုပါကနားလည်နိုင်သည် ? နောက်ဆုံးတွင် Mark Rutte နှင့် King တို့ကသင့်ကိုအလွန်စိတ်သက်သာရာရစေခဲ့သည်။ ခင်ဗျားဒါကိုအားကိုးတယ်။
လူတွေဟာစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာသူတို့အဆုံးသတ်တဲ့အခါဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ All-kill virus ကိုအမှန်တကယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်မလား။ (ထာဝရနှင့်အစဉ်အမြဲသက်သေပြနိုင်သောယုံကြည်စိတ်ချရသော) မီဒီယာတွင်အဖြစ်အပျက်များနှင့်ရုပ်ပုံများ မှလွဲ၍ အခြားအထောက်အထားများကိုသင်တွေ့ပါသလား။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်ဒီမှာကြိုတင်ဟောကြားခဲ့သည့်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ရဲ့ပေါ်ထွက်လာခြင်းမျှသာလော။
သင်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့လျှင် @MDNG မင်းလမ်းပေါ်မှာ Humvee၊ ငါတို့လိုအပ်နေသူကိုကူညီနေတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ၎င်းသည်လိုအပ်သောပစ္စည်းများဖြည့်ဆည်းပေးသည်ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးစခန်းများအတွက်တဲများတည်ဆောက်သည်ဖြစ်စေသင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်။https://t.co/CoD3ycAQ39
- MD National Guard (@MDNG) မတ်လ 20, 2020
သူတို့သည်မေရီလန်းတွင်ကဲ့သို့စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်သွားနေကြသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ဖော်ပြပါအစီရင်ခံစာကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်နယ်သာလန်နှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများ၌လည်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ဒါကအထူးပရောဖက်ပြုဟောကိန်းထုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကသရုပ်မှန်ပဲ။
နိုင်ငံရေးနှင့်မီဒီယာများကဤဗိုင်းရပ်စ်သည်ယခင်ကသူတို့ထင်သည်ထက် ပို၍ အန္တရာယ်များပြီးအလွန်ခက်ခဲသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွမ်းကျင်သူများကစုစုပေါင်းပိတ်ဆို့ရန်အကြံပေးလိမ့်မည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေအနည်းဆုံးရှိသူမည်သူမဆိုလာသင့်သည်။
၎င်းကိုသင့်အားအရေးပေါ်ကိစ္စအဖြစ်သင့်ကိုရောင်းမည်။ ၎င်းကိုသင့်အားကောင်းမွန်စွာရည်ရွယ်ပြီးသင့်အတွက်လည်းကောင်းရောင်းချလိမ့်မည်။ လူတိုင်းကိုသော့ခတ်ခြင်းသည်သင်၏ကောင်းကျိုးနှင့်လုံခြုံမှုအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့အဆိုးဆုံးအိပ်မက်ထဲမှာမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်တာထက်အများကြီးပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် The Hunger Games ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့သောဇုန်များသို့ရွှေ့ပြောင်းသွားသည်။ ထိုအချိန်တွင်ပြည်နယ်သည်သင်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအားလုံးကိုစုပ်ယူရန်ကတိကဝတ်များနှင့်အတူ ၀ င်ငွေအိတ်မြည်။ အခြေခံ ၀ င်ငွေကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ကူညီသူအဖြစ်ကယ်တင်လိမ့်မည်။ ဒီအတွက်ဘယ်သူပေးမှာလဲ။ (ကြည့်ပါ ဒီမှာ)
ခင်ဗျားတို့ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကွန်မြူနစ်ဝါဒသို့အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်လိုက်သည့်စုစုပေါင်းပြန်လည်နေရာချထားရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့နေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မျက်မြင်မရသောဗိုင်းရပ်စ်ကိုကယ်လွှတ်သည့်အနေဖြင့်၎င်း၏အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ရောင်းမည့် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်။ ထိုအရှိပါတယ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုများလာတယ် ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းစသည်ဖြင့်ပေါ့။ စစ်တပ်ကပြောမယ်။
“ မင်းကိုကာကွယ်ဖို့ငါတို့ဒီမှာရှိနေတယ်။ မင်းတို့ကိုကူညီဖို့ဒီမှာရှိနေတယ်။ မင်းတို့အကျိုးအတွက်ပဲ။ ကျနော်တို့ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများကိုထောက်ပံ့ဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသက်သာစေရန်ဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ကျနော်တို့တွေ့ရခဲသော coronavirus ဆန့်ကျင်ထောက်ခံမှုကမ်းလှမ်းရန်လာကြပြီ။ လူတွေကဒီကိုလာပြီးဆန္ဒအလျောက်ပဲလာကြတယ်။ညွှန်ကြားချက်များကိုသင်နားထောင်ရမည်။"
ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုထောက်ပံ့ပါ။ ထို့ကြောင့် 'master script' နှင့်နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြသောဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပါ။ ငါ၌ကူးစက်ရောဂါကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးအားလုံးခြုံငုံနေသောဗိုင်းရပ်စ်စနစ်အကြောင်းပြောဆိုသည်။ အချိန်တန်ပြီ။ မင်းလုပ်နိုင်တယ် ကောင်းစွာ တစ်ခုခုလုပ်
source link ကို entries တွေကို: eur.army.mil, rt.com, telegraaf.nl
ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် - coronavirus ကိုကာကွယ်ရန်အရေးပေါ်သော့ခတ်ခြင်း (ထိန်းချုပ်ထားသောဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်လုယက်ခြင်း)
coronavirus (lockdown) အစီအမံများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။ လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များ
၀ န်ကြီးချုပ် Mark Rutte Coronavirus ၏မိန့်ခွန်း -“ အားလုံးကအရမ်းလေးနက်ပေမယ့်အဖေကသင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်”
Coronavirus COVID-19 ရောဂါ - ဘဏ္resာရေးပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်အာဏာရှင်စနစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်၊ bioweapon သို့မဟုတ်လိမ်လည်မှု?
Martin Vrijland သည် Coronavirus covid-19 ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
Tags:: 2020, coronavirus, နောက်ခံလူ, ဥရောပ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုပြီးမှသာ, Maryland, စမ်းသပ်စင်တာများ, စမ်းသပ်မှုပို့စ်များ, စုစုပေါငျး, ဗိုင်းရပ်စ်, ဖလပ်, VS
URL ကို Trackback | comments RSS Feed
21 မှမတ်လ 2020 16: 01
လူစီဖာရီ Illuminati နှင့် Freemasonry သည်အမှန်တရားကိုသင်မြင်နိုင်သည့်သဲလွန်စများကိုအမြဲပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်သင်္ကေတများ၊ စာသားများသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတများနှင့်တွေးတောနိုင်သမျှအရာများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကြေးနန်းတွင် "ကျွန်တော်တို့ဟာရုပ်ရှင်ဆိုးနေတာပဲလို့ခံစားရတယ်" ဟု Rutte ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်အမှန်တရားအတွက်ထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစာသားအတိုင်းယူသင့်သည်၊ သို့သော်လူတို့သည်ဤသဲလွန်စများကိုအေးစက်။ စူးစမ်းခြင်းဖြင့်လုံးဝမျက်စိမမြင်မိကြပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာသားအရဇာတ်ညွှန်းရေးထားသောရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသရုပ်ဆောင်သူများဖြစ်သည်။ ပြproblemနာမှာဇာတ်ညွှန်းကိုသူတို့ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မာတင် Vrijland wrote:
21 မှမတ်လ 2020 16: 30
အပြင်မိုက်ကယ် pedophilia စွပ်စွဲခဲ့သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ ... ဒါပေမယ့်ဒီကြောင့်ဖြစ်ရပြီပေမည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူသည် Rooseveld နှင့် Marten Luther King သည်လူကောင်းများဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်သံပြိုင်ဖြစ်သည်
21 မှမတ်လ 2020 18: 13
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိပင်စင်ရန်ပုံငွေများ - ၁.၅၆၀ ဘီလီယံ။ ဒီအိုးဟောင်းတွေက“ coronavirus သေရင်” ရနိုင်မလား။ နယ်သာလန်သည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့သူတစ် ဦး အနေနှင့်လား။ ယုံမှားသံသယမရှိဘူး။ `` ပူးပေါင်းကြံစည်သူတွေးခေါ်သူ!! `။ ။
21 မှမတ်လ 2020 20: 11
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ဒတ်ချ်လူမျိုးအားလုံးအတွက်အခမဲ့ငွေ .. အကယ်၍ သက်ကြီးရွယ်အိုများအားလုံး coronavirus ဖြင့်သေလျှင် ... ထိုအိုးမှလာနိုင်မည်လား။
21 မှမတ်လ 2020 21: 14
ဟုတ်တယ်၊ ဒါကစမ်းသပ်မှုတစ်ခု ... ..
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်သင်နဲ့သင်တို့၏မင်းကမင်းတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာမသန့်ရှင်းတဲ့လူထုတွေအပေါ်မှာစမ်းသပ်မှုမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲ။ ၎င်းသည်သင်အပေါ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်ပြုလုပ်နေသည်ကိုသင်သတိမပြုမိဘဲဖြစ်နေသည်။ ဘဝအားလုံးသည်အသက်ရှင်သူတိုင်းအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နေ့တိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များကိုရေးသားနေကြတယ်, ထိုပုံပြင်များကိုပုံစံကငါတို့စိတ်ဝိညာဉ်၏တိုးတက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ ထို့ကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည်ဤထူးခြားသောအယူအဆများကိုရေးသားစဉ်သူတို့သည်သင်၏တုန့်ပြန်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားရုံသာမကသူတို့၏အမြတ်အစွန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်သူတို့သည်သူတို့၏ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုအမှတ်မထင်ရေးသားခြင်းဖြင့်မကောင်းသောကောင်၏အခန်းကဏ္acceptedကိုလက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဘ ၀ ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင့်အတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ကောင်ကအကောင်းဆုံးအခန်းကဏ္ is ဖြစ်တဲ့အတွက် - အမြတ်အစွန်းအများဆုံးဖြစ်တာအပြင် သို့သော်ဤနည်းဖြင့်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏နိမ့်ဆုံးအတွေးအခေါ်နှင့်ဖြစ်တည်မှုအဆင့်ကိုကျော်။ လျစ်လျူရှုထားခဲ့သည်။ အထက်ပါအဆင့်သည်သူတို့၏အဆင့်ရှိအရာအားလုံး၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောအမှားဖြစ်သည်။ ဤအနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ပိတ်မိနေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်တန်ဖိုးကိုဘဏ်စာရင်းများသို့မဟုတ်သာမန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကဆုံးဖြတ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသော်လည်း၊ တန်ဖိုးကို ၀ ိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝမှုဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သောအဖြစ်အပျက်ကသင့်ကို ပို၍ ကြီးသော၊ ပိုကောင်းသောလူတစ် ဦး ဖြစ်စေသလား၊
21 မှမတ်လ 2020 21: 29
သင်ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အုပ်ချုပ်သူများထက်သင့်တွင်စွမ်းအားနှင့်ခွန်အားပိုရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေ။ သင်၏မူလဝိညာဏ်၏စွမ်းအား! ယခုသင်၏အစွမ်းသတ္တိသို့အဆင့်! အခု! အဲဒါကိုဖတ်ပါနှင့်တစ်ခုခုလုပ်! ရှာဖွေပါ။ ငါတို့အလှည့်ပဲ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်မရှိတော့ပါ။ မင်းမှာတစ်ခုတည်းသောအစစ်အမှန်အာဏာရှိတယ်။ ရှာဖွေပါ။ မင်းရဲ့စွမ်းအားထဲကိုဝင်ပါ။ ငါဆိုလိုတာက ရှာကြည့်ပါ။ အဲဒါခက်ခဲပါတယ်။ https://www.boekenbestellen.nl/…/de-werkelijkheid-zoa…/35030
21 မှမတ်လ 2020 22: 23
Wilfred Baker wrote:
22 မှမတ်လ 2020 10: 21
ငါ Zandvoort ကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်၊ ကားတစ်စီးငှားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသမျှအရာအားလုံးကိုတင်လိုက်တယ်။
ဒီမှာအရမ်းတိတ်ဆိတ်တယ်၊ အရမ်းတိတ်ဆိတ်သွားတယ်၊ အားလုံးကစူပါအမှတ်အသားနဲ့နီးတယ်၊ ငါတို့နှစ်ပေါင်းများစွာလာနေပြီ။ ငါနဲ့အနီးကပ်လူတွေကသင့်ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုနှိပ်ဖို့တောင်မနှောင့်ယှက်တာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ။ ။ သငျသညျအစဉ်မပြတ်ငါကြားရရုံအရူးဖြစ်ကြပေမယ့်သင်တို့ကိုငါ Bro နှင့်အတူဝမ်းသာတယ်!
22 မှမတ်လ 2020 10: 49
တိုက်ခိုက်မှုအများစုသည်သင်၏မိတ်ဆွေစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သောလခပေးသောဆိုရှယ်မီဒီယာအစောင့်များမှဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါ ၀ င်ပုံရသူများဖြစ်သည်။ ဘယ်စစ်တပ်ကအခုပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလဲ။ ပခုံးပတ်ပတ်လည်မှာလက်နက်လားဒါမှမဟုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့စစ်တပ်လား။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စစ်သားမည်မျှရှိသနည်း။ အိမ်မှသူတို့၏ကွန်ပျူတာများတွင်အရပ်သားအဝတ်အစားများဝတ်။ ဆန္ဒပြပွဲများတွင်ပါ ၀ င်လာသူများမှာမည်သူတို့နည်း။ ကောင်းကျိုးတစ်ခုရနေချိန်မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်သလား။ သြဇာသက်ရောက်သူများ…
အွန်လိုင်းဆွေးနွေးမှုများအားလုံးကိုလိုက်နာရန်အထူးပြုသည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့်၎င်းတို့၏လူမှုမီဒီယာကျည်ဆန်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရည်ရွယ်သည်ကိုသတိပေးပါလိမ့်မည်။
22 မှမတ်လ 2020 11: 16
သူတို့ဟာကွန်ပြူတာနောက်ကွယ်မှာသာမက၊ အမြောက်အမြားလည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်နေရာများတွင်တည်ရှိပြီးစျေးဝယ်ရန်ဟန်ဆောင်ကြသည်၊ သူတို့ကပန်းခြံများနှင့်သစ်တောများတွင်လည်းရှိနေသည်၊ လူသွားစရာမလိုသည့်နေရာတိုင်းတွင်အဆင်ပြေသည်။
22 မှမတ်လ 2020 11: 05
ယခုအခါတရားဝင် (တရားဝင်) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကိုနေရာအနှံ့အပြားတွင်လူများ (နေဆဲ) ရှိ / မရှိဝဲးသည့်နေရာများရှိနေရာများတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, Jumbo ၏ဝင်ပေါက်မှာလူတွေ (တစ်ချိန်က Jumbo တွင်လူ ၂၅ ယောက်သာလျှင်) လက်များကိုဆေးကြောရန်တာ ၀ န်ခံသောရေကန်တစ်ခုချထားသည်။ စျေး ၀ ယ်ခြင်းဟုယူဆရသော IM များလည်းရှိသည်။
သေးငယ်တဲ့ဥပမာ။ ငါဂျမ်ဘိုသို့လမ်းလျှောက်လာသည် (လက်ဆေးခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ရမည့်သူအားကျွန်ုပ်အားအိမ်၌ကျွန်ုပ်လက်များကိုဆေးကြောသန့်စင်ထားသောကြောင့်လက်ဖြင့်ဆေးကြောခြင်းမပြုဘဲ ၀ င်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းကိုယ်ရံတော်သို့ပြောကြားခဲ့သည်) ။ ပြီးတော့ဈေးဝယ်ထွက်ချင်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်နဲ့စကားစမြည်ပြောတယ်။ ငါကဒီအစီအမံတွေကိုတကယ်မယုံဘူး၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုခံခဲ့ရတယ်၊ ငါတို့ခန့်မှန်းမယ်ဆိုရင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ဟာအဆ ၁၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ လောက်ပိုပြီးဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်။
ထိုလူကချက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်အားစတင်ဖြေကြားခဲ့သည် -“ မင်းဒါကိုလုံးဝမှားယွင်းနေတာမမြင်နိုင်ဘူး၊ Corona ဟာတကယ်အန္တရာယ်များတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောအစ်မ၏သမီးမှာအလွန်အမင်းနေမကောင်းဖြစ်ပြီး ၄ ရက်ကြာ ICU တွင်နေခဲ့သည်။ သူသည်မနေ့က ICU မှလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးယခုအခါပြန်လည်ရပ်နားခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဘေးထွက်အလုပ်ဖြစ်သဖြင့် Corona သည် လူတိုင်းအတွက်အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်။ "
ယခုငါနယ်သာလန်၌အထူးသဖြင့်များစွာသောလူတို့လာရန်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်အထူးသဖြင့် Corona ကပ်ရောဂါနှင့်သံသယများကြောင့်အစီအမံများ၏အသုံးဝင်မှုကိုမမြင်တွေ့သောသူများအတွက် IM တစ်သန်းရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ရရန်။
မနေ့ကလည်း Nieuwsuur မှာသရုပ်ဆောင်တွေကနေတစ်ဆင့်အေးစက်တဲ့စံနမူနာကောင်းပြခဲ့တယ် -
Corona ကြောင့်အလွန်နာမကျန်းဖြစ်နေသည့်မင်းသမီးငယ် (၂) ဦး ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည် (ဆောင်းရာသီအားကစားတွင်နှစ် ဦး စလုံးစာချုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း) သူတို့တွေဟာမင်းသမီးတွေပဲဆိုတာသိဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် hardware store (သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး လည်း) မှလူကြီးတစ် ဦး သည်ခြံစည်းရိုးနေရာချထားလိုသောကြောင့်သစ်သားဆွဲယူသူကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူကသူဝယ်ယူထားသောသစ်သားထုကို (ချပ်ပြား ၆ ခုဟုထင်သည်) ကိုချဲ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူသည်ပြင်ပ၌တာဝန်မရှိကြောင်းသိသော်လည်းသူ့ကိုယ်သူချုပ်ရန်တွန့်လန့်လွန်းသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
မင်းသမီးတစ် ဦး အားဆောက်လုပ်ရေးစျေးကွက်ရှိသရုပ်ဆောင်မင်း၏ပုံရိပ်များကိုပြသခဲ့ပြီး၊ သူတို့သည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကိုနားမလည်။ သူတို့အတွင်း၌နေရမည်ဟုအထင်အမြင်သေးကြသည်။
ကင်မရာ2wrote:
22 မှမတ်လ 2020 13: 31
သင်၏အစီရင်ခံစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဟယ်ရီ vries ။
ငွေအမြောက်အမြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိုအစောင့်များ (လုံခြုံရေးအစောင့်များ) သည်တစိတ်တပိုင်းအပြစ်တင်ခံရပြီးတိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်
အမှန်စင်စစ်သရုပ်ဆောင်အားလုံးနှင့် အကယ်၍ သင်သည်သူတို့အားအရူးဖြစ်သည်ဟုပြောသောလူများအားသင်ညွှန်ပြပါကသင်သည်အရူးမဟုတ်သော်လည်းသတိရှိသည်။
ပြီးတော့ Rutte ကအမှန်တရားကိုအမြဲပြောတတ်တယ်။ ဒုတိယအခန်းထဲမှာပဲ Rutte က Poelenburg Zaandam ရှိသရုပ်ဆောင်များကို“ the the the the ledge” ဟုခေါ်သည့်တောင်တန်း၏တူးစင်မဟုတ်ဘဲမြေကြီးပေါ်မှ Rangers (the dirgeiest ragge) အစိုးရဝန်ဆောင်မှု နေရာတိုင်းနှင့်မသင့်လျော်သောအစီအစဉ်များနှင့်ကင်မရာများကိုချိတ်ဆွဲနိုင်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြင့်
22 မှမတ်လ 2020 11: 28
လူမှုမီဒီယာပေါက်ကွဲမှုများ -“ callရာမခေါ်ဆိုခြင်း၊ နေအိမ်တွင်တည်းခိုခြင်း” ။
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်သည် "လက်သည်းခြေသည်းများမကျန်" မဖြစ်မီမကြာမီတွင်၎င်းသည်အထက်မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောစေတနာအလျောက်သော့ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်သည့်ဤထက်ဝက်သောသော့ခလောက်ကို NL ၌ပြဌာန်းပြီး ၅ ဆပိုမိုတင်းကျပ်လိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် စပိန်နှင့်ပြင်သစ်။
22 မှမတ်လ 2020 16: 35
ငါ alt-market.com site ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖတ်ရှုနေပြီးအထူးသဖြင့် Brand ဈေးကွက်၏အဓိကပုဂ္ဂိုလ် Brandon Smith ၏ဆောင်းပါးများကကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းသတင်းကောင်းပေးခဲ့သည်။ ငါ (အမြဲ) သူ့ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိခဲ့ပြီးသူသည် 'ထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံ' မဟုတ်သူဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည် (သူ) သည်အမြဲတမ်းလက်ဝဲ - ညာပါရာဒိုင်းအတုကိုရည်ညွှန်းသည်၊ လက်ဝဲနှင့်လက်ယာမှန်ကြောင်းအမြဲတမ်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအမြဲတမ်းဖော်ပြသည် တူညီသော“ breadmen” အတွက်သီးသန့်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲလူအားလုံး၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုထိရောက်စွာဖမ်းယူရန်သာရည်ရွယ်သည်။ သူကအလွန်ကောင်းစွာအချိန်ကြွလာသောအခါနစ်မြုပ်ဖို့ "alt ညာဘက်" သင်္ဘော၏ကပ္ပတိန်အဖြစ် pied piper အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူကိုမှန်ကန်အတွင်းသူသည်အထက်တန်းလွှာ၏ပြီးပြည့်စုံသော tool တစ်ခုအဖြစ် Trump အမည်ရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ယခုအချိန်တွင်သူသည် covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ မျိုးစေ့ကြဲသူများစခန်း၌အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းနေသည်။ သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြသည် - covid ဗိုင်းရပ်စ်သည်“ ပူဖောင်းအရာခပ်သိမ်း” ကိုဖုံးကွယ်ရန်အဖုံးတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနေသည်၊ သို့မှသာဗဟိုဘဏ်များသည်အချိန်၏အကြီးမားဆုံးအကျပ်အတည်းအတွက်အပြစ်တင်ခံရခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် (တမင်တကာ) က၎င်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ။
သူကဤဗိုင်းရပ်စ်သည်ထင်သည်ထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိပြီးသေစေနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။ ကျွန်ုပ် (ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သတိပြုမိသည့်အချက်အရ) ဤဗိုင်းရပ်စ်သည်တုပ်ကွေးကဲ့သို့အဓိကအားဖြင့်အလွန်အားနည်းနေသောလူများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့်အလွန်အားနည်းချက်များရှိနိုင်သည့်ဖျားနာခြင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကဲ့သို့သေခြင်းနှင့်နီးစပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
22 မှမတ်လ 2020 17: 38
ဟုတ်ကဲ့၊ တစ် ဦး ကနောက်ဆုံးလိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုအသားတင် pawn? ရုံပြောပါ ...
22 မှမတ်လ 2020 19: 12
Corona ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်လာမည့်ကြီးမားသောအစ်ကိုကြီးကမ္ဘာကြီးနှင့်အမှန်တကယ်အချိန်တွင်ထွက်ပေါ်လာမည့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ပတ်သက်သောသူ၏နောက်ဆုံးပေါ်ရှည်လျားသောဆောင်းပါးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်အရာကစိတ်အနှောက်အယှက်အများဆုံးဖြစ်စေသနည်း Brandon Smith က MSM သည် CORONAVIRUS ၏အန္တရာယ်များနှင့်ပြင်းထန်သောအချက်များဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အစသည်အစဉ်အမြဲဖော်ပြနေသည်။ ၎င်းသည်အချိန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းမှလူများကိုကာကွယ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်လေးနက်မှုကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။
သူက quarantine အတွက်ဒီထက်ပိုပြီးစောဒကတက်သည်မှာ၎င်းသည်ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်မဟုတ်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ MSM မှာဆန့်ကျင်ဘက်အတိအကျကိုရိပ်မိတာပဲ၊ ဒတ်ခ်ျ MSM လား၊ အခြားဥရောပနိုင်ငံများရှိ MSM ဟုတ်မဟုတ်၊ သူတို့အားလုံးဟာလုံးဝခြောကျခြားဖွစျပွီးတခွားသူတှနေဲ့အတူတကွအာမဂေဒနျအကွောငျးကြှနျုပျတို့ကိုပွောပွရမယျ။ ဥပမာအားဖြင့်ဒတ်ချ်လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်သည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည့်အတွက်သူတို့သည်လူများအားလုံးလုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများကိုရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းသည်မြေပုံတွင် (ထင်မြင်ချက်အတိုင်း) အထက်တန်းလွှာတွင်ပါ ၀ င်နေခြင်းကြောင့်လူ ဦး ရေသည်ကြောက်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်ဝင်နေသောလူ ဦး ရေသည်သင်လိုချင်သောလမ်းကြောင်း (အဖြေများ) ကိုပေးပို့ရန်အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။
စကားမစပ်၊ ကျွန်မမှာအာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုမှာမိသားစုရှိတယ်။ အဲဒီမှာလူ ဦး ရေ (ဥရောပလူ ဦး ရေထက်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအများကြီးကြုံခဲ့ရပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုအလွယ်တကူကြောက်စရာမလိုဘူး) ကလုံးလုံးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာဖြစ်လာတယ်၊ ဥရောပ၏ထက်ဝက်သည်ယခုအခါထာဝရအမဲလိုက်ရာနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးကျန်များမှာမူသေဆုံးလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုနိုင်ငံ၏ပျမ်းမျှနေထိုင်သူသည်အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်သည်။ စျေးဆိုင်အားလုံးရက်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားရသည်
ငါဗိုင်းရပ်စ်အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိထင်ပါတယ်ငါကသေချာပေါက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ထက်ပိုအန္တရာယ်ရှိပေမယ့်စူပါအများကြီးပိုအန္တရာယ်များသောမထင်, သင်လည်းအစီရင်ခံစာများ (သင်ဘာမှမယုံကြည်နိုင်ပေမယ့်) မှလည်းကြားနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကျန်းမာရေးအလွန်မကောင်းသော (အန္တရာယ်ကျရောက်သောအုပ်စုများ) သေဆုံးသည်။ ဒါကတုပ်ကွေးရောဂါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတုပ်ကွေးရောဂါနဲ့လည်းဆက်စပ်နေတယ်။
သူစစ်ဆေးသည်မဟုတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အထက်တန်းလွှာမဟာဗျူဟာသည်အထက်တန်းလွှာအလုပ်အကိုင်နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုပါးစပ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အရသာတစ်ခုပေးတယ်။
Zandi မျက်လုံး wrote:
22 မှမတ်လ 2020 21: 11
ထူးဆန်းတဲ့ဆရာသည် Brandon ၏အတိုက်အခံပြုမှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်နှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်။
22 မှမတ်လ 2020 19: 34
အုံကြွမှု foran ခေါ်ဆိုမှုပိုကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိခိုက်နစ်နာသောနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူ ၅၀၀၀ တွင် ၁ ဦး ကဲ့သို့သောအင်အားကြီးမားသောတုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၀၀၀x ခန့်တွင်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများရှိနေသည်
22 မှမတ်လ 2020 20: 11
22 မှမတ်လ 2020 20: 12
22 မှမတ်လ 2020 20: 15
22 မှမတ်လ 2020 20: 52
Event 201 မတိုင်မီက Crimson Contagion ဟုခေါ်သည့်အမေရိကန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ မနေ့ကမနေ့က Pompeo ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် Live Event အကြောင်းပြောခဲ့သည်။
22 မှမတ်လ 2020 20: 58
31 မှမတ်လ 2020 21: 33
လာမည့်မေလ ၁၃ ရက်နှင့်အထက်တွင် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းပုံရသည်။ https://azcher.org/powerplay2020/
24 မှမတ်လ 2020 04: 36
ဒါဟာပုံမှန်အတိုင်းသံသယရှိသူ၏ script ကိုအညီအတိအကျဖြစ်ပျက်
၀ န်ကြီးချုပ် Rutte: နောက်အဆင့်ကတော့လုံးဝပိတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းပါ
အဆင့် ၁) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၈
LOCK STEP - ပိုမိုတင်းကျပ်သောအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းသက်သောကမ္ဘာ
ကန့်သတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူ eadership နှင့်
တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave ပြန်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်
သငျသညျသငျ့သညျ ရဲ့ login မှတ်ချက် post နိုင်တော့မည်နိုင်ရန်အတွက်။
« လာမည့် coronavirus lockdown တွင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ
Coronavirus ဆိုတာလူ့ဘောင်ကိုခိုင်မာစေတယ်၊ »
ဇူလိုင်လ 2017 - FE ည့်သည်များ - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
> စုစုပေါင်းလည်ပတ်မှု - 16.768.413
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်၊
David Icke London စစ်မှန်သောဆင်ဆာလုပ်ထားသောဗွီဒီယို - Icke သည်အမှန်လား၊ အတုလားလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားဟာထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းနှင့်ရောနေသလား။
မီတာတစ်ဝက်ခွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သော Mark Rutte နှင့် Hugo de Jonge တို့၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
Corona အကျပ်အတည်း - အစောပိုင်းခြေရာခံမှုများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ မှလွဲ၍ ပိတ်ဆို့ခံရမှုမှထွက်ရန် ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိကြာနိုင်သည်
မာတင် Vrijland op David Icke London စစ်မှန်သောဆင်ဆာလုပ်ထားသောဗွီဒီယို - Icke သည်အမှန်လား၊ အတုလားလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားဟာထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းနှင့်ရောနေသလား။
Marianne op သင့်ပတ်လည်ရှိလူများသည်အဘယ်ကြောင့်မျက်မမြင်ဖြစ်ရသနည်း။
ထောက်ပံ့ရေးစိတ်ထဲ op သင့်ပတ်လည်ရှိလူများသည်အဘယ်ကြောင့်မျက်မမြင်ဖြစ်ရသနည်း။
နှင်းဆီ op ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးရန်နှင့်ပင်မဆဲလ်အချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားသည်
မာတင် Vrijland op ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးရန်နှင့်ပင်မဆဲလ်အချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားသည်
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ sign up ကိုနဲ့ချက်ချင်းလာသောအခါအသစ်တစ်ခုဆောင်းပါးအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိဖို့အောက်ကရိုက်ထည့်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ဖုန်း, i-pad ပါသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာလက်ခံရရှိရန်အစိမ်းရောင်ပူဖောင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။
Privacy ဖော်ပြချက် AVG အထောက်အထား
ဒီနည်းကို Privacy ဖော်ပြချက်ဖတ်ရန်
2020 မာတင် Vrijland ©။ All rights reserved ။ Solostream အားဖြင့် theme.
ဤ popup ပိတ်လိမ့်မည်
ဆိုက်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်အားဖြင့်, သင် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းသဘောတူသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဤ website ပေါ်တွင် cookie ကို setting များကိုသင်ကဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးဖို့ "cookies များကိုခွင့်ပြုပါ" ဟုသတ်မှတ်နေကြသည်။ သင်သည်သင်၏ cookie ကို setting များကိုပြောင်းလဲနေစရာမလိုဘဲဒီ website ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်သို့မဟုတ်သင်ကလစ်နှိပ်ပါ "လက်ခံသည်" အကယ်. ရန်သဘောတူကြသည်ကိုအောက်တွင် ဤအအဖွဲ့အစည်းများ။